Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Gumaysiga oo Shacabka Gonder Cadaadis Saaray & Arintoo Kasii Dartay.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Gonder ee Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay ciidamada wayaanuhu kawadaan howl gal kadhan ah dadka shacabka ah ee kasoo horjeeda xukuumada TPLF, sida warkan aan kuhelay xukuumada wayaanaha ayaa todobaadkan gaysay Gobolka Xabashida ciidamo aad ubadan oo kuhubaysan baabuurta gaashaaman kuwaas oo loogu talo galay in lagu aamusiiyo dibad baxayaasha cadhaysan ee qoomiyada Axmaarada.
Sida ay sootabinayaan goob joogayaal kusugan magaalada Gonder ciidamada Wayaanaha ee halkaas lageeyay ayaa bilaabay in ay dadka magaalada saaraan cadaadis xoogan si ay afka uqabtaan dadka dareen kooda muujinaya waxayna xabsiyo aan lagaranaynin u dhaadhiciyeen dad kala duwan oo kamid ahaa shacabkii magaalada Gonder.
Ciidamada cadaadiska loo tababaray ee gumaysiga Itoobiya ayaa isku fidiyay dhamaan isgoosyada iyo xaafadaha magaalada waxaana guud ahaan magaalada kadhacaysa rasaas ay ciidamadu ku cabsi galinayaan dadka dibad baxayaasha ah, sidoo kale goob joogayaal warbaahinta uwaramay ayaa cadaynaya in ay jiraan dad kudhintay rasaasta ay ciidamadu ridayaan iyo qaar kale oo kudhaawacmay.
Sidoo kale ciidamada ayaa lagu soo waramayaa in ay bartilmaameed sanayaan dadka ay kutuhun sanyihiin in ay hor boodayaan ama abaabulayaan kacdoonada hadheeyay Gobolka Axmaarada, Warkan ayaa intaas kudaraya in ay dadka labirtilmaameed sanayo isku gadaameen dad shacab ah oo diidan qabashadooda halka ay in badan oo dhalinta kamid ah bilaabeen in ay ugalaan jabhadaha hubaysa sida Gombot 7 Arbanyoj.
Dhinaca kale gobolada kale ee Axmaarada ayaa si lamid ah sida Gonder ay uga jiraan cadaadiska iyo gabood falada shacabka ay ku hayaan ciidanka gumaysigu waxaana lagu soo waramayaa in ay xabsiyada kujiraan kumanaan kamid ah shacabka xabashida ee kacdoonada kawaday gobolka Axmaarada.
Sikastaba ha ahaatee ciidamada gumaysiga ayaa hada shacabka ula dagaalamaya sida ciidamo hubaysan oo kale waxayna goobaha kacdoonadu kajiraan udiraan ciidamo kuhubaysan baabuurta gaashaaman iyo hubka waawayn halka dowlada aduunku ay mudaharaadayaasha u adeegsadaan sunta indhaha ka ilmaysiisa.